အရာ ၀ တ္ထုနှင့်အပြုအမူစွဲလမ်းမှုများသည် dysregulation (2017) ၏တူညီသောနောက်ခံဖြစ်စဉ်ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည် - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စှဲ dysregulation တစ်အလားတူနောက်ခံဖြစ်စဉ်ကို (2017) မျှဝေနိုင်ပါသည်
စွဲလမ်း။ 2017 Aprပြီ 21 Doi: 10.1111 / add.13825 ။
Sussman S က1, Rozgonjuk: D2, ဗန်တွင်း Eijnden RJJM3.
မှမှတ်ချက် - ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘုံအပြုအမူတွေ pathologizing မပါဘဲအမူအကျင့်စွဲ conceptualize နိုင်မလဲ?
ပါ ၀ င်မှု - ဖယ်ထုတ်ခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု၍ 'စွဲလမ်းမှု' ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းသည်အသုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ စွဲလမ်းမှု၏အမှန်တကယ်သီအိုရီရှုထောင့်ကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံနေရသည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ စွဲသည်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်သောစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောစနစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချမှတ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော dysregulation အများအပြားအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်။ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပြီးပြင်းထန်မှုအတွက်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟုအဘယ်ကြောင့်ယူဆသင့်သည်ကိုရှင်းလင်းရန်နှင့်ဘုံအပြုအမူများကိုအလွန်အမင်းစိတ်မရှည်စွာကာကွယ်ခြင်းကိုတားဆီးရန် Kardefelt-Winter et al ။  ၎င်းကို 'ထပ်ခါတလဲလဲပြုမူသောအပြုအမူသည်သိသိသာသာထိခိုက်မှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးယိုယွင်းစေသောသဘောသဘာဝကိုဒုက္ခရောက်စေသော ဦး ဆောင်မှုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်လူအားဖြင့်လျှော့ချခြင်းနှင့်သိသိသာသာအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်း' ဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်တွင်လည်းမူတည်ကြောင်းစာရေးသူများကလျစ်လျူရှုထားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 'စစ်မှန်သော' အရက်သေစာကို ပို၍ ယာယီအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းပုံစံနှင့်ခွဲခြားရန်အန္တရာယ် - ကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံစံကိုအဆိုပြုထားသည်။2] ။ ထို့အပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသည် 'သိသာထင်ရှားသော' ချို့ယွင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါအတိအကျသတ်မှတ်ခြင်းသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အခြေအနေတွင် ဦး တည်။ အရေအတွက်ဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ အရည်အသွေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းပါဝင်သည်။1, 3] ။ Kardefelt- ဆောင်းရာသီ et al ။ ထို့အပြင်တစ် ဦး အမူအကျင့်စွဲအဖြစ်တမင်ရွေးချယ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်စေသောအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူတွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်အဆိုပြုထား။ ရွေးချယ်မှု (သို့) ရွေးချယ်မှုမရှိခြင်းသည်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုအငြင်းပွားမှုများတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြisနာတစ်ခုဖြစ်သည်။4] ။ စွဲလမ်းနေသည့်အချိန်တွင်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်မတ်စောက်သောနှောင့်နှေးသောလျှော့ဈေးသို့မဟုတ်အခိုက်အတန့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ သို့မဟုတ်ချက်ချင်းဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံသောက်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။3-5] ။ သို့သော်၎င်းသည်ဆေးစွဲခြင်းမဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ ထို့အပြင် Kardefelt-Winter နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးနည်းဗျူဟာမှရရှိလာသောချို့ယွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများကိုဖယ်ထုတ်ရန်အဆိုပြုထားသည်။ ဤအကန့်သတ်ချက်ကိုအရက်မှီခိုမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်အသုံးပြုပါက၎င်းပျံ့နှံ့နှုန်းမှာအလွန်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာပုံစံတစ်မျိုးတည်ရှိပြီး၎င်းတွင်ပါဝင်မှုစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဖြေရှင်းရန်ငြင်းခုန်နိုင်သည်။3].
ဤအရာများထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ အဆိုပြုထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပယ်ဖျက်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ကြမ်းတမ်းပြီး၊ စာတမ်းနောက်ပိုင်းတွင်စာရေးသူများအနေဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းစွဲလမ်းမှုနှင့်လူမှုမီဒီယာစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းသည်သိသာထင်ရှားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုချို့ယွင်းချက်များမရှိကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ ဤအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများသည်မကြာသေးမီကပင်အဓိကအသုံးပြုမှုတွင်ဤနည်းပညာများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်အလွန်ငယ်ရွယ်သည်။ ဤအပြုအမူများ၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အထောက်အထားသည်တည်ဆောက်နေသည်။6, 7] နှင့်လုပ်စရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။
ထိုကဲ့သို့သော Kardefelt-Winter ၌ရှိသကဲ့သို့အပြုအမူစွဲ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်။ ဆွေးနွေးချက် et al ။ ကြိုဆိုပါတယ် သို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းမှုကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည့် neurobiological ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်ဘဝပုံစံနှင့်ပေါင်းသင်းမှုမှတ်ဉာဏ်၏ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွဲဖြစ်နိုင်သည်မှာ neurobiological system သည်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သွားသည်။ မှုများထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ် Periodic ဖြစ်နိုင်သည်; ပြင်းထန်ခြင်းရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်မ; စံတန်ဖိုးသို့မဟုတ် deviant ပေါ်လာလိမ့်မည် နှင့်တစ်ချိန်ချိန်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် .
1Kardefelt-Winther D. , Heeren A. , Schimmenti A. , van Rooij A. , Maurage P. , Carras အမ်။ ဘုံအပြုအမူတွေကို pathologizing မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့အမူအကျင့်သဘောတူနိုင်မလဲ? စွဲ 2017; https://doi.org/10.1111/add.13763.
2Wakefield JC, Schmitz MF မည်သူမည်မျှအရက်သောက်ခြင်းရောဂါရှိသနည်း။ အသိုင်းအဝိုင်းစစ်တမ်းနှစ်ခုတွင်ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက်များပြန်လည်သင့်မြတ်စေရန်အန္တရာယ်ရှိသောကမောက်ကမဖြစ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း။ Front Psychol ၂၀၁၄; 2014: 5. စစ [Corrigendum ။ 22; ၅၊ အပိုဒ် ၁၄၄၊ ၃ စစ။ ] အပိုဒ် ၁၀ ။
3Sussman အက်စ်ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲ: အယူအဆများ, အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသ။ ကင်းဘရစ်၊ ဗြိတိန်။ 2017 ။
4Yaffe G. စွဲသူများအတွက်ဘားကိုချခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: ပိုလန်ဂျေ, ဂရေဟမ် G. အ, အယ်ဒီတာများ။ စွဲနှင့်တာဝန်။ Cambridge, MA: MIT သတင်းစာ၊ 2011 ခုနှစ်, စစ။ 113-139 ။
Science®၏ Web ကို |
5Bickel WK, Mueller ET, Jarmolowicz DP စွဲလမ်းမှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ခုနှစ်တွင်: မက်ကရက်ဒီ BS, Epstein EE, အယ်ဒီတာများ။ စွဲ: တစ်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်, 2nd edn ။ အောက်စ်ဖို့၊ ယူကေ - အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ 2013, စစ။ 3-16 ။
6Lin YH၊ Chiang CL၊ Lin PH၊ Chang LR၊ ကို CH၊ Lee YH et al ။ စမတ်ဖုန်းစွဲဘို့အဘို့အအဆိုပြုရောဂါရှာဖွေစံ။ PLOS ONE 2016; 11: e0163010 ။
7ဗန် den Eijnden RJ, Lemmens JS, Valkenburg PM လူမှုမီဒီယာရောဂါစကေး။ Comput Hum Behav 2016; 61: 478-487 ။